Jumma မူဘာရက် - သောကြာနေ့အကြောင်းကိုသင်သိရန်လိုအပ်ပါသည်အရာအားလုံး 2018
Jumma Mubarak is the term which Muslims uses all around the world to greet their Muslim followers on the six days of the week called “သောကြာနေ့”.
သောကြာနေ့ (Jumma မူဘာရက်) is an important day in Islamic religion and has special orders by the Allah (God). There are two reasons for this; Muslims pray the Friday prayer or Jumma prayer every week and second according to the Islamic history, there have been many important events have been happened on this day.
Jumma is an Arabic word which means “သောကြာနေ့”. While Jumma is an Arabic language word but Muslims all around the world uses the same term for the Friday, does not matter that which language they are following.
သောကြာနေ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရေးပါမှု၏မွတ်စ်လင်ဘို့သန့်ရှင်းသောနေ့ကစဉ်းစားသည်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်အားဖြင့်ကယ်လွှတ်ခဲ့ကြရာ (PBUH) ဤသည်နေ့ရက်သည်၎င်း၏အရေးပါပုံကိုပြောပြရန်.
ဤသည်နေ့ရက်သည်မယ့်မင်္ဂလာကိုခေါ်ဒါပေမယ့်လည်းမနက်စောစောတစ်ရက်အဖြစ်ရသေး (အခမ်းအနား၏နေ့) တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်အားဖြင့် (PBUH). ဒါပေမယ့်သောသန့်ရှင်းသောအဖြစ်သောကြာနေ့တောင်းဆိုများအတွက်သာအကြောင်းပြချက်င်.
အများအပြားအရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များမွတ်စလင်မခေါ်မှုကြောင့်အရာအားဤနေ့၌ရာအရပ်ကိုယူရှိပါတယ် Jummah နေ့က (Jumu'ah)သန့်ရှင်းသောနေ့ကအဖြစ်. ဤရွေ့ကားဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်များပါဝင်သည်:
According to Ibn Majah, Tirmidhi ကလူကဒီနေ့၌သေဆုံးခဲ့သူကပြောပါတယ်ရှိရာကာလ၏မိခင်သင်္ချိုင်း၏ပြစ်ဒဏ်ကနေကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အဖြစ်ဤနေ့ကိုခေါ်ထားပြီး
သငျသညျ Jumma မူဘာရက်အားဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?
အဆိုပါအလုပျမူဘာရက်သည်သို့မဟုတ် Mabrouk ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသို့မဟုတ်ဂုဏ်ပြုလွှာသောဆိုလိုတယ်အာရဗီဘာသာစကားကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပါသည်. မူဆလင်ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ဒီစကားလုံးကတခြားမွတ်စလင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နေ့ကဂုဏ်ပြုဖို့အသုံးပြုထားပြီး.
Jumma မူဘာရက် Hades
အင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပာယ် jumma မူဘာရက်
Arabic အဘိဓါန်အတွက် jumma မူဘာရက်
ဒါကြောင့်, သင်တစ်ဦးကမွတ်စလင်ဟုကြောင်းကြားလျှင် Jumma မူဘာရက်သို့မဟုတ် Jumma Marouk အခြားနောက်လိုက်ရန်, ဤသူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှဒီအထူးနေ့၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှုတ်ခွန်းကြောင်းဆိုလိုတယ်. အဆိုပါမူဘာရက်နှင့် Mabrouk နှစ်ဦးစလုံး Arabic အဘိဓါန်စကားလုံးများကိုဒါပေမယ့် Non-Arabic အဘိဓါန်မွတ်စလင်နိုင်ငံများတွင်နေမြဲနေစဉ်,
မွတ်စ်လင်အစားဒူနဲ့တူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဒေသခံသို့မဟုတ်အမျိုးသားရေးဘာသာစကားများ၏စကားလုံးသုံးပြီး၏တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှသောကြာနေ့၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ရန်ဤစကားလုံးသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်, ဟိန်ဒီ, အင်္ဂလိပ်, နှင့်တူရကီစသည်တို့ကို.
အချို့လူများကလည်းသောကြာနေ့၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏အခြားဆက်စပ်စကားလုံးများကိုသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်. ဤစကားသည်ပျော်ရွှင် Jummah ပါဝင်သည်, happy Jumma, happy Jumma မူဘာရက် 2018, Juma Kareem and Friday Mubarak etc.
You can go with any of them which you like most instead of limiting yourself with one specific Jumma Mubarak dua, the Jumma Mubarak dua လိုအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမှတဆင့်နှုတ်ဆက်ဖို့မွတ်စ်လင်အသုံးပြုသောထားပြီး Whatsapp, Facebook က, နှင့် Twitter နှင့်ပင်ကို SMS စသည်တို့မှတဆင့် .
သင်တို့အပေါ်မှာတရားဝင်ဆုတောင်းပဌနာပြီးနောက်အပါအဝင်မည်သည့်တိကျသောလမ်းအတွက် Jumma မူဘာရက် Dua စေနိုင်သည် သောကြာနေ့ 2018 ဗလီထဲမှာ. ကမ်ဘာပျေါတှငျအခြို့သောဗလီအထူးအဘို့အစည်းရုံး Jumma နှစ်ခု သူတို့တပြင်လုံးကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်အထူးသမွတ်စလင်ဘို့ဆုတောင်းကြလော့ရသော.
Jumma မူဘာရက် 2018: အရေးကြီးပုံ, နှစ်, မင်္ဂလာသက်, ः ades, နှင့်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် https://jummamubarak.info
အကြောင်းကိုအချက်အလက်များရယူပါ Jumma မူဘာရက် Jummah ၏အရေးပါမှုအပါအဝင်, dua, Hdes, နှင့်ကုရ်အာန်၏ကျမ်းပိုဒ်
ဒူအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ခုနှစ်တွင် Jumma မူဘာရက် Hades…
အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်တွင် Jumma မူဘာရက်နောက်ဆုံး Quotes 2018
Jumma မူဘာရက်အကောင်းဆုံးပုံများပြီးတော့ဓာတ်ပုံ Idea…